Breast Inverted nipples နို့ပါးစပ်
အမျိုးသမီး အပျိုပါ။ အသက် ၂၇ပါ။ နို့သီးခေါင်းနှစ်ဖက်စလုံး အထဲထဲမှာမြုပ်နေပီး ခေါင်းမပေါ်ပဲ ဖြစ်နေလို့ပါဆရာ။ မွေးရာပါ ခလေးဘဝတည်းက နို့သီးခေါင်းနေရာလေးက အပေါက်အရာလေးပဲဖြစ်နေခဲ့ပီး အခုရွယ်မှာ နို့သီးခေါင်း မြုတ်နေပီး ဖြစ်နေလို့ ဘလိုကုသလို့ရနိုင်ပါသလဲဆရာ။ အကြံအညဏ်ပေးစေလိုပါတယ်ဆရာ။ ယောက်ျားကျားရ ခလေးရရင် ခလေးမဆို့တတ့်ပါဆရာ ကုလို့ရနိုင်ပါသလားဆရာ
မဖြေခင် ပြင်ပါရစေ။ ပီး မဟုတ်။ ပြီးလို့ရေးရတယ်။ ခလေးအစား ကလေးလို့ရေးတာက ပိုမှန်တယ်။ ဘလိုမဟုတ်။ ဘယ်လိုလို့ ရေးရတယ်။ မဆို့တတ့်မဟုတ်။ မစို့တတ်လို့ ရေးရတယ်။
တချို့က နို့ပါးစပ်လို့မေးလာတယ်။ ဗမာလိုရောဂါနာမည် ပေးတာတွေက တယောက်နဲ့တယောက်၊ တရပ်နဲ့တရပ် မတူကြလို့ အတော်ကြီး ဦးနှောက်စားတယ်။ အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ Inverted Nipple နို့သီးထိပ်ဖျား အထဲခွက်ဝင်နေတာ ဖြစ်မယ်။ အဲလိုဖြစ်တာကို ရင်သားရောဂါဗေဒစာရင်းထဲမှာ မသွင်းဘူး။ အထူးခွဲစိတ်ပညာထဲမှာသာပါတယ်။ ရောဂါမဟုတ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကလေးကိုနို့တိုက်ရတဲ့အခါ ပြဿနာပေါ်တယ်။
ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲကို အဆင့်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်။ နို့သီးထိပ်ရဲ့တစိတ်တပိုင်းဝင်နေတာကို Dimpled ခေါ်တယ်။ အကုန်ဆိုရင် Inverted ခေါ်တယ်။ တချို့တ တဖက်ထဲဖြစ်တယ်။ နဲနဲသာဖြစ်သူက နို့တိုက်ဖို့ပြဿနာမကြီးဘူး။ ကလေးက လမစေ့၊ အလေးချိန်နည်းရင်တော့ ခက်မယ်။
အဆင့် (၁) လက်နဲ့ဆွဲထုတ်ပေးလို့ လွယ်တယ်။ နို့သီးဘေးက အညိုရောင်အဝိုင်း Areola ပေါ်မှာ ဖိထားပြီး၊ ထိပ်ဖျားကို ထုတ်ပေးရတယ်။ အဆင့် (၂) ဆွဲထုတ်လို့ရပြီး၊ ပြန်ဝင်သွားတဲ့အဆင့်။ မခွဲတဲ့နည်းကို စမ်းနိုင်တယ်။ နို့သီးထိပ်ကို ရေခဲတုံးလေကပ်ပေါ်ရင် သန်မာမှုဖြစ်သလို ထောင်မတ်လာနိုင်တယ်။ အဆင့် (၃) ဆွဲထုတ်လို့မရ။ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ရမယ်။
Hoffman Technique နည်းကတော့ လက်နဲ့ဘဲ ဆွဲထုတ်နည်းပါ။ အရောင်ရင့်အဝိုင်း နို့သီးထိပ်ဘေးကပ်လျက်နေရာမှာ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးကိုထားပြီး၊ ခပ်တင်းတင်း အောက်ကိုဖိချ၊ တပြိင်နက်တည်းမှာ ဘက်နှစ်ချောင်းကို အဝေးကို ခွါပေးရတာပါ။ အနည်းဆုံး တနေ့ ၂-၅ ကြိမ်လုပ်ရတယ်။
နို့စုပ်စရာနဲ့စုပ်နည်း၊ ဝယ်လို့လွယ်တယ်။ တောတွေမှာ ဝယ်မတော့ သင်္ဘောရွက်အရိုးနဲ့ စုပ်ပေးကြတယ်။ Evert-it Nipple Enhancer ဆိုတာလည်း (စီလီကွန်) နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ဆေးထိုးပိုက်လို ကရိယာဖြစ်တယ်။ နို့မတိုက်ခင် လုပ်ပေးရတယ်။ နို့သီးထိပ်ကို ဆွပေးတာပါ။ လက်မနဲ့ လက်ညှိုးသုံး၊ ၁-၂ မိနစ် ကိုင်ပြီး၊ လှိမ့်ပေးပါ။ ပြီးရင် ချက်ချင်း အေးနေတဲ့ (ရေခဲ)အဝတ်နဲ့ ထိပေးပါ။ ရေခဲကို အကြာကြီးတော့ မသုံးပါနဲ့။ ထုံသွားမှာစိုးလို့။ ဟိုရုပ်ရှင်မျိုးရိုက်ရင် အဲဒီနေရာကို အသားပေဘို့ လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းပါဘဲ။
Medela SoftShells ဆိုတာက မခွဲစိတ်ဘဲ သုံးနိုင်တယ်လို့ ကြော်ညာတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ ခပ်ခုံခုံး ပလပ်စတစ်ခွံမှာ နူးညံ့တဲ့ (စီလီကွန်) ပစ္စည်းနဲ့လုပ်တာ။ လေဝင်ဘို့ အပေါက်လည်းပါတယ်။ နို့ရည်စုပ်နိုင်တဲ့ဓါတ်ထည့်ထားတယ်။ နို့ရဲ့ အရောင်ရင့်ပိုင်းကို ဖိပေးထားတာမို့ နို့သီးထိပ်ကို စူထွက်လာစေတယ်။ အပေါ်ကနေ ပုံမှန်ဝတ်ဆင်ထားရင် ပါနေမှန်း မသိရဘူး။
Avent Niplette ဆိုတာကလည်း (ပလပ်စတစ်) ခွက်တခုပါ။ နို့ထိပ်ပိုင်းကို ပန်းပုထုသလို လုပ်တာမျိုးပါဘဲ။ ထိပ်ဖျားစူထွက်စေအာင် ဘေးက အရောင်ရင့်ပိုင်းကို ဖိပေးစရာ ဖြစ်နေအောင်လုပ်တာပါ။ ဘရာကို တလကိုးသီတင်း ဝတ်ထားရင် နို့သီးထွက်နေမယ်လို့ဆိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင်နဲ့ ကိုယ်ဝန် ၆ လအတွင်း သင့်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မွေးရာပါအတွက်တော့ အာမခံတာမတွေ့ရဘူး။
ထုံဆေးနဲ့ခွဲတယ်။ နို့သီးထိပ်ရဲ့အခြေ၊ အရောင်ရင့် အဝိုင်း Nipple areola junction မှာ ဒါးနဲ့ခွဲပေးပြီး၊ နို့သီးဖျားကို ခွက်ဝင်နေအောင် ဆွဲထားတဲ့ (တစ်ရှူး) Tethered structure ကို ရှင်းပေးရတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ ရှင်းရမလဲ ဆိုတာက ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်တယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် ဆေးထည့်တာကို (စပါယ်ရှယ်) လုပ်ပေးရတယ်။ Plastic and white non-stick padding dressings ကို ခွဲစိတ်အပြီး၊ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ သုံးရတယ်။ နို့သီးထိပ်ပိုင်းကို ဖိနှိပ်ထားသလိုမျိုး မဖြစ်စေအောင်လုပ်ရတယ်။ ဆေးခန်းသုံးဂွမ်းစအလယ်မှာ အပေါက်ဖေါက်ပေးတာမျိုးပြောတာပါ။ ပြီးမှ Bra ခပ်နုနု သိပ်မချောင်တာမျိုး ဝတ်စေရတယ်။ Tape (တိပ်) ကနေ အသားနုတက်လာမဲ့ အရေပြားနဲ့ (တစ်ရှူး)တွေကို မထိခိုက်စေရပါ။ ပိုးသေဆေးအပြင် အနာသက်သာဆေး ပေးတယ်။
1. Deformed Nipples နို့သီးရောဂါများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/deformed-nipples.html
2. Nipple Cracked and Fissure နို့တိုက်မိခင် နို့ထိပ်ကွဲနေခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/nipple-crack-and-fissure.html
3. Breast Inverted nipples နို့ပါးစပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/breast-inverted-nipples.html
3. Extra Nipples ရင်သားအပို https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/extra-nipples.html
4. Inverted nipples နို့ပါးစပ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/inverted-nipples.html
5. Mastitis and Breast Abscess နို့နာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/breast-abscess-and-mastitis.html
7. Sore nipples နို့သီးခေါင်းနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/12/sore-nipples.html
ကွန်မင့်မှာ မဖွယ်မရာရေးလာရင် ဖျက်ပါမယ်။ ဘလော့ပါမယ်။ ဆောရီး။ လူတိုင်းက မိခင်နို့စို့ခဲ့ကြတယ်။
၁။ အသက် ၅၅ နှစ် အမျိုးသမီးပါဆရာ။ ညဘက်ကို နှစ်နာရီ နောက်ပိုင်းလောက်မှ စအိပ်ဖြစ်တာ ခုဆို ဆယ်နှစ် ကျော်ပါပြီဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တပါတ်လောက်က နေ့ခင်းဘက် မူးလဲလို့ပါဆရာ။ အဲလို ညဘက်နောက်ကျမှ အိပ်တာ အလေ့အကျင့်လား ရောဂါတခုလားဆရာ။ စောအိပ်ဖို့ပြောတာလဲမရလို့ ဘယ်လိုပြုပြင်ပေးလို့ ရနိုင်မလဲ သိချင်ပါတယ်ဆရာ။
၂။ ဆရာခင်ဗျား ဆရာ့ရဲ့ဆေးပညာဆောင်းပါးများကို ကျွန်တော် အစဉ်တစိုက်ဖတ်ရှုခဲ့သလို အရမ်းလည်း နှစ်သက် လေးစားမိပါတယ်။ အခုလည်း ကျွန်တော်အပါအ၀င် ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေခံစားနေရတဲ့ အအိပ်ပျက်ရောဂါ insomania အကြောင်းလေး ရေးပေးပါခင်ဗျား။
အိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါဆိုတာ ကျန်းမာရေးကြောင့်နဲ့ စိတ်ပိုင်းကြောင့် ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ အိပ်တဲ့စနစ်လိုတာလည်းရှိတယ်။ ဆေးသုတေသနဆရာဝန်တွေက ဦးနှောက်ကိုပါလေ့လာကြတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိပ်ချိန်နဲ့ နိုးနေချိန် အလှည့်ကျရှိတယ်။ တခုဖြစ်နေစဉ် ကျန်တခုက မဖြစ်ပါ။ တမျိုးမျိုးမှာ လွန်ကဲနေခြင်းကနေ ကျန်တခုကိုပါသက်ရောက်စေတယ်။
Medical Causes of Insomnia ကျန်းမာရေးအကြောင်းခံ
အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ သာမန်လောက်ကနေ ဆိုးတာအထိရှိတယ်။ တချို့ကျန်းမာရေးအကြောင်းခံတွေ သူ့ကိုယ်၌ကနေ အိပ်မရတာဖြစ်စေပြီး၊ တချို့တော့ ကျန်မာရေးကြောင့် အနေရအထ…
Anal itching စအိုနေရာယားခြင်း
၁။ အသက်က ၂၅ ပါ။ မိန်းကလေးပါ အပျိူပါ။ မေးရမှာတော့ရှက်တယ် ဆေးခန်းလဲမသွားရဲလို့ပါ။ စအိုဝက အရမ်းယားလို့ပါ။ ကုတ်မိလို့ နည်းနည်းတောင် အနာဖြစ်ချင်နေပြီဆရာ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလဲ မသိလို့ ကူညီပေးပါဆရာ။
၂။ နားနှင့်မနာ ဖဝါးနှင့်နာပါရှင့်။ သမီးက အသက် (၂၈) နှစ် အပျိုပါ။ စအိုတ၀ိုက်မှာ ယားယံနေသည်မှာ နှစ်လကျော်လောက် ရှိပါပြီ။ သံချဆေး Albandazone 400mg ကို နှစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ သုံးကြိမ် သောက်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စအိုပတ်လည်တင်မကဘဲ မိန်းမအင်္ဂါ ဘေးနှစ်ဘက်နှင့် အပြင်လမ်းကြောင်းမှာပါ ယားယံနေပါတယ်။ နေ့ရောညပါ ယားနေတာပါ။ အရင် ယားနေတာ အဖြူမဆင်းပါဘူး။ အခု အဖြူဆင်းတာ နှစ်ရက်ရှိပါပြီ။
ဆေးပညာစာဖြစ်လို့ ရောဂါတွေကို စုံအောင်ရေးရတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ သန်ချဆေးသောက်တာနဲ့ စသင့်တယ်။ စအိုနေရာယားခြင်းကို ဆေးစာနဲ့ Pruritus Ani လို့ခေါ်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေမှာ သာမန်ကာ ရှန်ကာ ဥပမာ အစားအသောက်၊ သန့်ရှင်းမှုလိုတာမျိုးတွေပါသလို ဆေးကျကျနနကုမှ ပျောက်မှာလဲပါတယ်။ အရေပြား ခြောက်သွေ့နေခြင်း၊ အရေပြားစိုထိုင်းမှု များနေခြင်း၊ ဝမ်းမလုံရောဂါ၊ ဝမ်းနုတ်ဆေး လိုတာထက်ပိုသောက်ခြင်း၊ ဆေးကြောတာကို လိုတာထက်ပိုလုပ်ခြင်း၊ ဆပ်ပြာ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးဆေးရ…
Bad breath ခံတွင်းနံ့ မကောင်းရင်
၁။ အသက် ၂၁၊ မ။ ခံတွင်းအနံ့မကောင်းခြင်း ကော်ဖီ၊ လက်ဘက်ရည်မသောက်ပါ။ ရေသောက်နည်းသည်။ သွားမှန်မှန်တိုက်သည်။ စကားမပြောချိန်ကြာလျှင် ခံတွင်းအနံ့ဆိုးခြင်းပိုဆိုးရွားကြောင်း သတိထားမိပါသည်။ ဖြစ်ချိန် သုံးလ။ ဘာကြောင့် ထိုသို့ဖြစ်ရပါသလဲနှင့် အနံ့ဆိုးပျောက်စေရန် မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိလိုပါသည်။ ဖြေကြားပေးစေလိုပါသည်ရှင့်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမအမရဲ့ အမျိုးသားက အသက် ၄၀ ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ သူက တခါတရံ စကားပြောတဲ့အခါ သူ့ခံတွင်းက ပုပ်ပုပ်အက်အက်အနံ့ ထွက်ပါတယ်တဲ့ရှင့်။ ကျမ အမကလဲ အမြဲလိုလိုပြောတတ်ပါတယ်။ ကန်တော့ပါ။ ဆေးစစ်ရန် အကြိမ်ကြိမ်ငြင်းဆန်ပါတယ်တဲ့။ သူကိုယ်တိုင်က အနံ့မရကြောင်း ပြောတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူတို့မိသားစုကို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေလိုပါတယ်ရှင့်။ အဲ့ဒါ ဘာရောဂါများ ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဘယ်လိုဆေးမျိူး သုံးစွဲသင့်ပါသလဲရှင့်။ ကျမလဲ အဲ့လိုပုံစံမျိုး ဘယ်တဦးတယောက်ထံမှ မကြားဖူး မသိဖူးပါရှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားစေလိုပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်။
၃။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်၏သား ၁၆ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့မှာ အသက်ရူထုတ်လိုက်သည့်အခါ ထွက်လာသည့် လေတွင် ဆိုးဝါးသည့်အနံတစ်ခု ထွက်ထွက်လာပါသည်။ ငယ်ရွယ်သည့်အရွယ်က အနည်းငယ်သာ ထွက်ပါသည်။ …
Muscle twitch ကြွက်သားလှုပ်ခြင်း
Leg cramps ကြွက်တက်ခြင်း
Women Pathology ခေမာ ဗေဒ
Rhumatic links လေးဘက်နာစာများ
Hypoparathyroidism လည်ပင်ကြီး ခွဲပြီးသည့်နောက် (၂)...
Pterocarpus macrocarpus မွှေးလှတဲ့ ပိတောက်
Pills and Women ဆေးတွေက မကွာ ကွာတာက လူတွေ
Health benefits of bamboo shoots မျှစ်အာဟာရ
ဘူး ဖူး ဗူး (သို့) မြန်မာစာမှာ ဖေါ်မြူလာရှိသလား
Black Vulture ကောင်သေလင်းတ ကျ၏တည်း
စဉ် ဆင် စင်
ဘော် နှင့် ဖေါ်
Surgical Adhesion ခွဲစိတ်ရရင် တွယ်ကပ်မှုဖြစ်တယ်
Bamboo shoot မျှစ်
Black and White အဖြူနဲ့အမည်း
Nausea and Vomiting ပျို့ချင်အန်ချင်
Spelling စာလုံးပေါင်းမှားရင် ရောဂါလည်းမှားတယ်
Early Rupture of Membranes ရေမြွာစောပေါက်ခြင်း
Womb သားအိမ်ဆိုတာ တခုတည်းသာရှိတယ်
Amniotic fluid ရေမြွာရည်
အနု နှင့် အဏု
Neck Lumps လည်ပင်း အလုံးအကျိတ်
Unengaged head ကလေးခေါင်းမဆိုက်သေးခြင်း
Conference table စားပွဲလည်း အရေးကြီးတယ်
Tri Color သုံးပန်လှ
ခေါင်း ခါး ခြေ လက်
The Presidents သမတများ
Invalid Vote တိမ်မည်းညိုရိပ်တွေ
ဆောင့် နှင့် စောင့်
Constitutional Monarchy စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
April Fools' Day အရူးလုပ်တဲ့နေ့
ငါးခြောက်သည် ငါးစိုထက် ဘာ့ကြောင့် ပို၍အထားခံသနည်း
ဝင် နှင့် ဝန်
မဲ့ မယ့် ဒါပေမဲ့ သို့ပေမဲ့
Cent Percent ကျွန်တော် သက်သာလာပြီ
Maung Tint Te မောင်တင့်တယ်
Substandard တန်းမဝင် ကမ်းမမြင်
Addison’s disease အဒ်ဒီဆွန် ရောဂါ
Fungal infections မှိုရောဂါများ
ထပ် နဲ့ ထက်
သုပ် သုတ် သုက် သုဒ်
ကျပ် နဲ့ ကြပ်
ကျေ နဲ့ ကြေ
ကျွန်တော် ကျွန်နော် ကျနော်
Mural Painting နံရံပန်းချီ
Barter System ဘာတာစနစ်
Cervical Spondylosis လည်ပင်း ကျီးပေါင်းတက်နေပါတယ်
Cerebral palsy (CP) စီပီရောဂါ
Hello Mama မမရေ
Public Hearing အမှုတခု
In vitro fertilization (IVF) ပြင်ပမှာ သန္ဓေတည်စေနည်...
စည်း နှင့် စီး
Hypotrichosis အမွေးထူပြီး သန်ချင်တယ်